Vantage Calendar ndiyo App yeVhiki paApp Store | IPhone nhau
Vantage Calendar ndiyo app yevhiki paApp Store
Zvekare tinokuzivisa iwe nezve zvinoshandiswa kana mitambo iyo Apple inopa kune vese vashandisi veayo zvishandiso. Kufanana neChina chega chega, vakomana vanobva kuCupertino vanoita application kana mutambo unowanikwa kune vashandisi mahara. Pane ino chiitiko, uye kusiyana neakambo pfuura uko kwavakangotipa mitambo, Apple yakasarudza chishandiso chekutarisira khalendari. Ichi chishandiso chinotipa maonero akasiyana pane atakajaira, achitiyeuchidza nezvezvikwereti zveSaga Wars Wars. Vantage Calendar ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye3,99 euros, asi kusvika China chinotevera tinogona kuchirodha mahara.
Vantage Calendari inozivikanwa nekuchenjerera kwayo aesthetics, ichisiya parutivi mabasa makuru atinogona kuwana mumashandisirwo anozivikanwa kushandisa karenda akadai seKarenda 5 neFantastical 2, saka Izvo hazvikurudzirwe kune vese avo vashandisi vanoshandisa zvakanyanya kushandiswa kweizvi zvinoshandiswa sezvo iwe usingawane akawanda emabasa anowanikwa mune aya marudzi ekushandisa.
Vantage Calendar inobatanawo nemaitiro eiyo Notification Center mawijiti, uye zvakare inotipa mukana wekuti tikwanise kubvunza yedu ajenda kubva kukiyi skrini. Pfungwa huru isina kunaka inowanikwa mukutenga-mu-app, kutenga kunotibvumira kuti tiwedzere chiitiko chinodzokororwa nekufamba kwenguva, chimwe chinhu chatinogona kukurumidza kugadzirisa tichishandisa yemuno iOS khalendari, kana isu tisiri mutsika yekuwedzera iyi mhando yechiitiko kukerenda yedu.
Imwe yeakanaka mapoinzi atinowana mune ino application ndeye mukana wekuti inotipa kana zvasvika gadzira iwo mavara ezvese zvinoshandiswa uye nezviitiko zvakasiyana izvo isu zvatinganongedzera kukerenda yedu, kuwedzera kune akasiyana mapepa uye mafonti ayo isu atinogona kushandisa kuratidza zvakakosha zviitiko pazhedhi yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Vantage Calendar ndiyo app yevhiki paApp Store
Apple inoshandisa yayo yega chigunwe sensor pane iyo iPhone 8